Iza moa ny Apostoly TSARATSARA (5) : Nahita ny helo – Apostoly TSARA . TSARA .
HomeApostoly TSARA . TSARA .Fijoroana VavolombelonaFanadihadiana sy fanontanianaRohy vitsivitsyIreo ASAAntsahamanitra 13 Avril 2013Fifandraisana
Apostoly TSARA . TSARA .
Natokana hizarana ireo Fijoroana vavolombelona sy ireo asan'ny Apostoly TSARA TSARA
Tsaratsara	Iza moa ny Apostoly TSARATSARA (5) : Nahita ny helo	April 3, 2013 tsarain22 Comments	Rehefa voarainy ny hafatra avy tany amin’i Jehovah Tompon’ny maro dia nentin’i Jesosy Kristy nankany amin’ny Helo amin’izay i Tsaratsara.
Tena mahatsiravina ny ao amin’ny afobe. Sifflet no mamoaka ny afo. Misy tevana be manelanelana ny mpivavaka sy ny tsy mpivavaka.
Misy karavasy vy hanajapian’ny maramilan’ny satana an’ireo izay voapanga ka manaraka hatramin’ny nofo rehefa voany.
Olona be dia be no ao amin’ny helo. Atambatra ny mponina rehetra eto Madagasikara dia averina aman’hetsiny dia tsy mbola mitovy isa amin’ny isan’ny olona very any amin’ny helo. Mijaly ny olona ao, lasa lelafo avy izay lalaovin’ny olona ao, lasa fohifohikely. Ny labiera sotroina iny mivadika afo, ny domy, ny rami ny karatra nolalaovina taty an-tany iny mivadika afo. Ny vehivavy janga misy bibilava afo mivoaka aminy, misy kankana kely mivoaka amin’ny maso mivoaka amin’ny orona. Ny maso mibotirika be.
Mipoaka toa ny volkano na bomba atota io ny afo, miakatra be mitovy amin’ny rahona ny haavon’ny afo. Dia mikikiaka mitaraina ny olona ao. Dia mampitomany mihitsy ny mahita izany mangitakitaka ny fo mahita izany rehetra izany. “Mijaly aho Jesosy ô” lasa mahay an’i Jesosy avy ireo mpangalatra sy olona rehetra ao amin’ny helo. Saingy tsy misy intsony ny famelan-keloka ao.
Tsy mijanona ny afo raha tsy levona ny olona. Dia avy eo velona indray. Dia miresaka milaza fa manenina tsy nivavaka, manenina nanompo sampy ary manenina amin’ny ratsy rehetra vita ny olona ao. Tsy misy ety an-tany mahay mibebaka noho ny olona ao amin’ny helo.
Ny mpandeha boîte de nuit, ny mpanao spectacle, aoka! atolory malaky ny fiainanareo. Ny mpivarotra toaka, ny mpivarotra rhum hidio malaky io fivarotanao io. Ny miankohoka amin’ny sarin–javatra voasikotra LOZA BE. Mibebaha dia manolo-tena amin’ny Jesosy raha mbola ety an-tany.
Kiakiaka ny ao amin’ny helo, mandadilada ny olona ao, mibebaka fa tsy afaka miverina intsony, tsy misy famelan-keloka intsony ny ao amin’ny afobe.
Share this:TwitterFacebookGoogleLike this:Like Loading...	afobe, helo	Post navigation
Previous Post“Ho avy ny lozabe…”Next PostIza moa ny Apostoly TSARATSARA (6) : Nitsangana tamin’ny maty faharoa 2 thoughts on “Iza moa ny Apostoly TSARATSARA (5) : Nahita ny helo”	Antra says:	April 3, 2013 at 9:48 pm	Jereo fa ato amin’ity boky ity ilay vy be mihodikodina notenenin’i Tsaratsara.
Olona tsy mifandray i Tsaratsara sy ilay koerana. NEfa dia zavatra iray ihany no notantarain’izy roa.
Reply	mitiyu says:	April 8, 2013 at 11:43 am	Misaotra Antra
Recent Posts	Tsy izaho intsony no velona fa Jesoa Kristy no velona ato anatiko
02 Novambra 2013 Hafatra lehibe ho an’i Madagasikara : Lazao azy ny Anaranao
Croisade FARADOBOKA ho an’i Madagasikara
Aoka koa izay ny “X-X”
Croisade Ambalavao sy Mahitsy
Recent Comments	Lemahitsy on Aza ampiadiana ny akohomizaravaovao on Fihaonana tamin’ny Mouva…Mitiyu on Batisa faha-3 Antananarivo : 1…“Mba ho iray i… on Fihaonana tamin’ny SEFIP…ONY on Batisa faha-3 Antananarivo : 1…	Archives	April 2016
fijoroana vavolombelona hafa